Nippon Paint | Royal Ayar
No. 64 (E), Mahabandoola Road, Pathein Township,
Ayeyarwaddy Region, Myanmar.
+95 (9) 78 520 1749
Sand & River Shingle Trade
Smart4Autoworks
Relevant of Government Project
Water, Street, Electrical Supply Project
Cement & MS Rod
Hotline - 09 78 520 1749
Nippon Paint သည် ဂျပန်နိုင်ငံနှင့် အရှနိုင်ငံများတွင် နံပါတ်(၁) နေရာဖြင့် ရပ်တည်လျှက်ရှိသည့်အပြင် နှစ်ပေါင်း ၁၂၀ ကျော် အတွေ့အကြုံရှိသော Paint Brand တစ်ခုလည်း ဖြစ်ပါသည်။ Nippon Paint ကို ဂျပန်နည်းပညာဖြင့် စင်္ကာပူနိုင်ငံတွင် ထုတ်လုပ်ထားပြီး မြန်မာနိုင်ငံသို့ တိုက်ရိုက်တင်သွင်းရောင်းချကာ Customer များ၏ လိုအပ်ချက်နှင့် စိတ်ကျေနပ်မှုများကို အစွမ်းကုန်ဖြည့်ဆည်းပေးလျှက် ရှိပါသည်။
Nippon Paint သည် အဆင့်မြင့်နည်းပညာများဖြင့် ပေါင်းစပ်ထုတ်လုပ်ထားသည့် အိမ်သုတ်ဆေးဖြစ်သည့်အပြင် သင်္ဘောသုတ်ဆေး၊ စက်ရုံသုတ်ဆေး၊ သစ်သာ၊ သံသုတ်ဆေးနှင့် အခြား Heavy Duty သုတ်ဆေးများစွာကိုလည်း နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု အဆင့်မြင့်နည်းပညာကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ရောင်းချလျက်ရှိပါသည်။
Nippon Paint သည်
ISO -9001 : 2000 / ISO -14001 / OHSAS 18001 / Bizsafe Star / SGBP Certifications အစရှိသည့် နိုင်ငံတကာ အသိအမှတ်ပြု ဆုတံဆိပ်များကိုလည်း ရရှိထားသည့်အပြင် ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးကို လိုက်နာသည့် စံနှုန်းပြည့် (Green Label ) အမှတ်တံဆိပ်နှင့်အညီ ဆေးများကို ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
လူသားတို့၏ ကျန်းမာရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်စိမ်းလန်းစိုပြည်ရေးကို ဘေးဥပါဒ်ဖြစ်စေသော ဓါတုဓါတ်ပစ္စည်းများ လုံးဝမပါဝင်သည့် နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြု Nippon Paint အိမ်သုတ်ဆေးများကို သုံးစွဲပြီး လူကြီးမင်းတို့၏ နေအိမ်ပတ်ဝန်းကျင်တို့ကို အလှဆင်ပါ။
. Single Star (အတွင်းပတ်တီး)
. Double Star (အတွင်း၊ အပြင်ပတ်တီး)
WALL SEALERS (နံရံအောက်ခံဆေး)
. Vinilex 5101 Odour-Less Sealer (အနံ့မပါသောနံရံအောက်ခံဆေး)
. Vinilex 2000 Water-based Sealer (ရေဆေးနံရံအောက်ခံဆေး
.Vinilex 5170 Oil-based Sealer (ဆီဆေးနံရံအောက်ခံဆေး)
. Vinilex 120 Active Primer (ဆီဆေးအောက်ခံဆေး)
. Red Oxide Primer (ဆီဆေးနံရံအောက်ခံဆေး)
.Bodelac 90000 Undercoat (ဆီဆေးနံရံအောက်ခံဆေး)
EMULSION PAINT (အတွင်းဆေး)
.Vinilex 5000 (ဆေးနံမပြင်းသောဆေး)
.Vinyl Silk (ပိုးသားကဲ့သို့ တောက်ပြောင်လှပသော အတွင်းဆေး)
.Easy Wash (ရေဖြင့်ပြန်လည်သန့်စင်နိုင်သောဆေး)
EMULSION PAINT (အပြင်ဆေး)
ENAMEL PAINT (ဆီဆေး)
.Bodelac 9000 (သစ်သား၊ သံတွေပေါ်သုံးနိုင်သည့်ဆေး)
WOOD VARNISH (သစ်သားအရောင်ဆေး)
WOOD VARNISH (သစ်သားအပြင်ဆေး)
ROOF PAINT (ခေါင်မိုးဆေး)
.Roofguard (နေပူဒဏ်ခံ၊ ရေမစိမ့်)
MARINE PAINT (သင်္ဘောသုတ်ဆေး)
.Nippelux Anti Corrosive 1101 (သံချေးတက်ကာကွယ်၊ဥတုဒဏ်ခံ)
. Anti Fouling 1201(ရေညှိတက်၊ ရေတိုက်စားခံနိုင်သည့်ဆေး)
ROAD LINE PAINT (လမ်းသုတ်ဆေး)
.Road Line Paint
.Reflective Road Line Paint
TEXTURE COATING (အလှဆင်ဆေး)
.Hi Pon 20-03 Epoxy White Primer
.Hi Pon 40-04 Expoxy Top Coat
.Hi Pon 50-01 Polyurethane Top Coat
.Hi-pon20-02 Epoxy Zn Phosphate 90
© Copyright 2018 Royal Ayar. All Rights Reserved & Developed by HapEye.Com